सोझा, ठट्यौला प्रम ओलीलाई रिस उठाउने बाङ्गा प्रश्नहरु कस्ता थिए? हेर्नुस् भिडियो – MySansar
सोझा, ठट्यौला प्रम ओलीलाई रिस उठाउने बाङ्गा प्रश्नहरु कस्ता थिए? हेर्नुस् भिडियो
Posted on May 8, 2019 by Salokya
मंगलबार संसदमा भएको हङ्गामा काण्ड प्रश्नोत्तरका क्रममा भएको थियो। यस्ता सोझा, ठट्यौला प्रधानमन्त्रीलाई रिस उठाउने गरी कस्ता प्रश्न सोधिएको होला भन्ने जिज्ञासा पक्कै जाग्यो होला तपाईँहरुलाई। प्रश्न सोध्न पाइन्छ, अपशब्द प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेर त प्रधानमन्त्री आफैले भन्नुभयो। अनि रेकर्ड खोलेर हेर्नुस् कस्ता कस्ता शब्द प्रयोग गरिएका छन् भनियो। संसदमा रेकर्ड खोलिएन तर युट्युबमा रेकर्ड खोल्न त पाइन्छ। ल हेर्नुस् हाम्रा ठट्यौला पिएमलाई रिस उठाउने बाङ्गा प्रश्नहरु कस्ता थिए।
1 thought on “सोझा, ठट्यौला प्रम ओलीलाई रिस उठाउने बाङ्गा प्रश्नहरु कस्ता थिए? हेर्नुस् भिडियो”
मेरो बिचारमा कमजोरी ओलीकै हो/ उहा सिट उखान टुक्काको बाँडी नसकिने भण्डार छ/ तर उहाले ” ……भुक्दै गर्छ हाती हिड्दै गर्छ” भन्ने उखान भुले जस्तै लाग्यो/
देउपाको आरोप आरोपनै होईन देउपाको आफु माथि आरोप लगाउनेको ध्यान मोड्ने कुटिल चाल मात्रै हो/ देउपालाई कम्ता मानशिक तनाव छैन/ यकातिर सत्ताको सबै भन्दा ठुलो पदमा आफ्नो कुनै बिकल्प हुनै नसक्ने भ्रममा ओलीले जिल्याई दियो भने अर्को तिर आफुलाई ज्ञानेन्द्रले गरेको शाही गालि “अब आफ्नै पार्तिकाले समेत गर्न थाल्यो/ तेसैले आफु नाठी आरोप लगाउनेको ध्यान मोड्न मात्रै उसले ओलीलाई …..गर्दै आयको हो/
नेपालमा सबै भन्दा बढी समय सम्म पटक पटक सत्ताको नेतृत्व गर्ने त् “देउपाकै” हो/ अहिले नेपाल जस्तो हुनु पर्ने थियो तेस्तो हुन् नसक्नु त् उनिहरुकै कारणले हो/ अहिले उनीहरुले ओलीले यो गरेर त्यो गरेन आदि जे आरोप लगाउंदै आयको छ त्यो आरोप उनीहरुले आफै माथि लगायको हो/ तेसैले ओलीले उनीहरुलाई जवाफ दिने होईन अझै ……./